I-Phantomgate: IValkyrie yokugqibela ifaka i-RPG ngamaqonga | I-Androidsis
I-Phantomgate: IValkyrie yokugqibela kukudityaniswa kweqonga, i-RPG kunye nomlo osekwe ekujikeni
I-Phantomgate: IValkyrie yokugqibela iphakamisa ukuba nayo kumdlalo ofanayo Yindibaniselwano phakathi kweqonga, i RPG kunye nomlo osekwe ekujikeni. Oko kukuthi, ngelixa utsibela umlinganiswa ophambili ogama lingu-Astrid, uya kudibana nothotho lweentshaba ezithi, isitayile sokuGqibela sokuFantela, sizakuvelisa umlo omdala osekwe ekujikeni.
I-RPG yenye yezinto ezibalulekileyo zalo mdlalo apho kungekho kusilela khona ekhokela iqela lamanyano phantom ukusinceda ukuphilisa okanye ukujoyina imikhosi ngamakhono abo ahlukeneyo anamandla. Isihloko esigcwele umxholo kunye neendlela ezahlukeneyo zokwenza ibali apho uya kuthi ungene emanzini awaziwayo eMidgard.
1 Venture ngeAstrid kumhlaba waseMidgard
2 Ngaphezulu kwama-300 amaqabane
3 Iintsomi zaseNorse
Venture ngeAstrid kumhlaba waseMidgard
Singaphantse sithi iPhantomgate: I-Valkyrie yokugqibela iyasilela nganto. Kuya kufuneka ncedisa uAstrid, uValkyrie oselula omele ubukroti bakhe kwaye ujonge ukusindisa umama wakhe ku-Odin. Ngexesha "le-epic" yakhe, uya kufunda ngamagunya akhe ayinyani afihlakeleyo aya kumnceda ukuba afezekise umsebenzi owaziwayo xa ejongene nalo thixo uphambeneyo waziwa njengo-Odin.
Iintsomi zaseNorse zikhona kuyo yonke indawo kunye nesihloko sesi sihloko Iplatifomu RPG ngokulwa okususelwa ekujikeni apho iimeko ziya kuba nomnxeba omlingo kwaye uyilo lwabalinganiswa lwenziwe ngendlela yokuba babenobukho obukhulu. Khange sifune ukushiya ecaleni olo seto lukwazi ukuntywilisela kulo lonke ibali elingaswelekanga, ukusombulula iiphazili ngokujonga amanqanaba ngokutsiba nokunye okuninzi, okanye uncedo lothotho lwemimoya sincede kwiinjongo zethu.
Ngokobuchwephesha zilishumi nangona ineengxaki zayo ezincinci Siyathemba ukuba bazoyisombulula kungekudala. Siza kuqala umdlalo kunye ne-protagonist yethu kunye nesiporho esincinci esiza kusinceda ukuba sikhule kule milo izakuvela kwasekuqaleni.
Ngaphezulu kwama-300 amaqabane
Umxholo obonelelwa yiPhantomgate: I-Valkyrie yokugqibela ibetha kakhulu, kuba ayinasiporho ukuze sikwazi ukwenza amaqela okulwa ukuze sikwazi ukoyisa zonke ezo ntshaba kunye nabaphathi bokugqibela abaza kuza kuthi. Ngaba ngaphezulu kwama-300 amanyeneyo onokuthi uyibeke kwinxalenye yakho, ukuze ufumane umbono wawo wonke umxholo olindileyo kumdlalo omkhulu weselfowuni.
Nangona eyona nto ibalaseleyo yile indlela yakhe yokuqonda ubucukubhede bomdlalo. Sele sitshilo ukuba liqonga, elinomlo osekwe ekujikeni kunye nezinto ze-RPG, ezinje ngokulinganisa. "Isiseko" okanye isiseko siya kwiiholide ezikumanqanaba okwandiswa okufutshane. Xa sixhuma, siqokelela izitshixo okanye siphosa amatye amakhulu ukuze senze indlela yethu, siya kufumana iintshaba ngamathuba eziya kuthi zinike umlo ngokwawo.
Nantsi iya kutshintshana kwaye Ingcinga yokugqibela. Ukulwa kunokwenziwa ngokuzenzekelayo okanye ngesandla. Khetha izakhono, hit utshaba, linda ithuba labo njalo njalo de enye okanye enye iphumelele. Inqanaba ngalinye liya kuba nomphathi wokugqibela, ke unokulungiselela ukudibanisa imikhosi yakho ngeyona ndlela ifanelekileyo.
I-Phantomgate: IValkyrie yokugqibela iye yafuna Ziqulathe iintsomi zaseNorse kulo mdlaloukuya kuzo zonke iintlobo zemozulu ezinje nge tundras ezinomkhenkce kunye namahlathi ashinyeneyo. Inyani yile yokuba ukuseta kuphumelele kakhulu. Inika i-halo yomlingo enomdla kwaye ibaluleke kakhulu kolu hlobo lwemidlalo ye-RPG apho ubumnandi busikhokelela ekubeni sibe namava amnandi okudlala.
Ngokobuchwephesha kufezekiswe kakuhle, nangona xa sikunye neAstrid kunye namaqonga, kukho lag kancinci. Oko kukuthi, kukho ukunqongophala kokusebenza kwaye oko akuhambi kakuhle ngendlela esingathanda ngayo. Oku kungenxa yomthwalo omkhulu wezinto ezifakiweyo, amacebo okucoca kunye nezinye izinto eziyimfuneko ekulungiseleleni. Eminye, ngokuzoba ilishumi, ubuninzi boopopayi, iintlobo zeentshaba kunye nokudityaniswa kweendlela ezahlukeneyo zomdlalo.
I-Phantomgate: I-Valkyrie yokugqibela ngumdlalo weqonga we-RPG kunye nomlo osekwe ekujikeni Oko kubonisa imvelaphi enkulu kwesi sizathu. Ngoku siyathemba ukuba bayakwazi ukuphucula ezinye iindawo ukuze bazenze iseti yeshumi; ungaphoswa kukuqeshwa kunye Maze: Umthunzi wokukhanya kunye nokufana okufanayo.
I-Phantomgate: IValkyrie yokugqibela
Ukudityaniswa kwayo phakathi kwamaqonga kunye nomlo osekwe ekujikeni
Amaqabane amaninzi ukuvula
Kwimowudi yeqonga ilala kancinci
I-Phantomgate: I-Valkyrie yokugqibela
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Phantomgate: IValkyrie yokugqibela kukudityaniswa kweqonga, i-RPG kunye nomlo osekwe ekujikeni
Umncedisi kaGoogle sele ehambelana nezixhobo ze-smart ze-10.000